Famoronan'ny mpanoratra - The Word Foundation
Teny fampidirana an'ny mpanoratra
Tsapako fa tao amin'ny vatana iray izay tsy ahafahako manafaka ny tenako. Very aho, irery ary tao anaty alahelo nalahelo. Ny zava-nitranga sy zavatra niainana niverimberina dia naharesy lahatra ahy fa tsy araka ny fisehoany ny zavatra; fa misy ny fanovana mitohy; fa tsy misy faharetana na inona na inona; fa ny olona matetika dia nilaza ny mifanohitra amin'izay tena tiany holazaina. Ny ankizy nilalao kilalao nantsoin'izy ireo hoe "make-mino" na "avelao isika hanao mody." Milalao ny ankizy, ny lehilahy sy ny vehivavy dia nanao fanahafana sy mody manao mody; somary vitsy ny olona marina sy tso-po. Nisy fako tamin'ny ezaka nataon'ny olombelona, ​​ary tsy naharitra ny fisehoana. Ny fisehoana dia tsy natao haharitra. Nanontany tena aho hoe: Ahoana ny fomba hanaovana ireo zavatra izay haharitra, ary hatao tsy misy fako sy fikorontanana? Ny ampahany iray amin'ny tenako dia namaly hoe: Voalohany, fantaro izay tianao; jereo ary hazony hatrany ao an-tsaina ilay endrika tianao hananana ny tadiavinao. Avy eo dia eritrereto ary holazao ary lazao izany amin'ny fisehoana ivelany, ary izay heverinao fa hangonina avy amin'ny atmosfera tsy hita maso ary hapetraka ao anatin'io endrika io sy manodidina azy. Tsy nieritreritra tamin'ireto teny ireto aho avy eo, fa ireo teny ireo dia maneho izay noeritreretiko avy eo. Nahatsapa ho matoky tena aho fa afaka nanao izany, ary avy hatrany dia nanandrana sy nanandrana ela. Tsy nahomby aho. Rehefa tsy nahomby aho dia nahatsiaro ho afa-baraka, afa-baraka ary menatra aho.
Tamin'ny taon-dasa dia nividy boky misy ny boky Very ao amin'ny Baiboly sy ireo boky adino any Edena aho. Amin'ny fandinihana ireo pejin'ireto boky ireto dia mahavariana ny mahita ny andalan-tsoratra hafahafa sy tsy takatry ny saina azo takarina rehefa mahatakatra izay voasoratra ato momba ny Triune Self sy ireo faritra telo izy; momba ny famerenana amin'ny laoniny ny vatan'olombelona ho tonga vatana tonga lafatra sy tsy mety maty ary ny Fanjakan'ny Faharetana, izay amin'ny tenin'i Jesosy dia ny "Fanjakan'Andriamanitra."